Maalinta: keyboard daaqadaha | Show Top
Maalinta: "keyboard daaqadaha"
Maalinta: keyboard daaqadaha
Sida loo nooca iyayaashu calaamad pound (£) isticmaalaya keyboard US, ee Windows 10?
On khariidad a keyboard Maraykanka ma jiraan wax £ fure. Si aad u hesho sumada waxaa looga baahan yahay inay ku cadaadiso qaar ka mid ah isu-gaynta fure. Si aad u hesho calaamad £ makiinad shaashadda ka, samee waxyaabahan soo socda: Hoos u hay ALT iyo nooca 0163 Ogow: The above will only work using the number pad keys…
Sida loo nooca iyayaashu calaamad pound (£) isticmaalaya keyboard US, ee Windows 8 iyo Windows 8.1?
On khariidad a keyboard Maraykanka ma jiraan wax £ fure. Si aad u hesho sumada waxaa looga baahan yahay inay ku cadaadiso qaar ka mid ah isu-gaynta fure. Si aad u hesho calaamad £ makiinad shaashadda ka, samee waxyaabahan soo socda: Hoos u hay ALT iyo nooca 0 1 6 3 Ogow: Kor ku xusan kaliya ee shaqayn doonaan isticmaalaya…
How To Windows 2 comments Item Jaishi